အီးမေးလ်တုံ့ပြန်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 25, 2007 Douglas Karr
မနေ့ကငါပျက်သွားတယ် ကျွန်ုပ်၏အလေ့အထများမည်မျှကျန်းမာကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အမြန်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါသည်လည်းစာဖတ်သူများနှင့်အတူဤနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းပြီးမြောက်ရန်အိပ်မပျော်သောညများ၌ဖြစ်သည်။ အလုပ်မှာကျနော်တို့ကများစွာသောအစပျိုးအပေါ်အရှိန်မြှင့်။ ငါပြီးသားပြည့်စုံသောအချိန်ဇယားကိုအတူပိုပြီးအလုပ်အပေါ်တာခံရဖို့ပုံရသည်။ စနေနေ့ရောက်တဲ့အခါအီးမေးလ်အနည်းငယ်ကိုခေါက်လိုက်ပြီးကျန်တစ်နေ့ (နှင့်နောက်ဆုံးည) မှာအိပ်ယာထဲသို့နွေးထွေးစွာအိပ်စက်အနားယူလိုက်သည်သို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားရှေ့မှာမြက်ပင်ပေါက်စပြည်နယ်တစ်ခုမှာနေခဲ့ရသည်။ ဒီဟာတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပိုပြီးအလုပ်များနေတာလား။
တနင်္ဂနွေစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းတစ်ခုမှာစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည် အီးမေးလ်တုံ့ပြန်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု စက်မှုလုပ်ငန်း။ နောက်ခံအချို့ - အီးမေးလ်တုံ့ပြန်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုသည်ယေဘုယျအီးမေးလ်လိပ်စာများမှအဝင်အီးမေးလ်များကိုကုမ္ပဏီများအားစစ်ထုတ်ခြင်း၊ စုစည်းခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ဆာဗာနည်းပညာဖြစ်သည်။ ဥပမာအနေနဲ့သင့်ရဲ့ company @ sales @ or support ဖြစ်နိုင်တယ်။
ထွက်ရှိ applications များအရေအတွက်တော်တော်လေးအထင်ကြီးပါ! အခြားအွန်လိုင်းရောင်းချသူများဘာလုပ်နေလဲကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌၊ အီးမေးလ်တုံ့ပြန်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုသည်ဒုတိယလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောသူများနှင့်အမှန်တကယ်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းလည်းမရှိသကဲ့သို့၎င်းတို့သည်သူတို့လုပ်သောစနစ်များ၏ရှုပ်ထွေးမှုလည်းမရှိပါ။
အီးမေးလ်တုန့်ပြန်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ကိုသက်ဆိုင်ရာလူဆီသို့လမ်းကြောင်းပို့ရန်ဘာသာရပ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသော့ချက်စာလုံးရှာဖွေမှုများကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ငါသည်လည်းစိတ်ကြိုက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်ချက်ချင်းအီးမေးလ်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခု - ငါကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးသူတို့မှာရှိသလားလို့မေးနိုင်တယ် API ကို နှင့်ဖောက်သည်များကိုထောက်ပံ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်တုံ့ပြန်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည်အီးမေးလ်ကိုအလိုအလျောက်လမ်းကြောင်းရောင်းလိမ့်မည်။ သူသည်လိုအပ်သောစီးပွားရေးအလားအလာများနှင့်ဆက်ဆံသောအရောင်းစာရေးများဆီသို့ရောက်လိမ့်မည် API ကို ထောက်ခံမှု။
ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာကျွန်တော့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးမကြာခင်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိမယ်လို့ငါ့ကိုကောင်းကောင်းပြန်ဖြေနိုင်တဲ့အီးမေးလ်ရလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ၊ ဒီဆောင်းပါးတွေနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုအွန်လိုင်းမှာကြည့်ပါ။ link များအတွင်း Enterprise နှင့် content link များပါဝင်သည် API ကို ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကူညီနိုင်သည့်ဆောင်းပါးများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများ။ ထောက်ခံမှုအုပ်စုများအတွက်ဤတုန့်ပြန်သောအီးမေးလ်များတွင်တိကျသောအမှားသတင်းများအတွက်ရေးသားထားသောဗဟုသုတအခြေခံသည့်ဆောင်းပါးများပင်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
၎င်းကိုမသိရှိပဲကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဤစနစ်များမှအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် အကယ်၍ သင့်မှာဒီရောင်းချသူများသို့မဟုတ် application အချို့နှင့်တိုက်ရိုက်အတွေ့အကြုံရှိမယ်ဆိုရင် ငါ့ကိုမျဉ်းကြိုးချလော့။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ် SaaS အဖြေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ရှာဖွေနေသည့်အခါကျွန်တော်ဘီးကိုအသစ်တီထွင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
မတ်လ 25, 2007 မှာ 11: 08 AM
ငါရက်သတ္တပတ်များစွာကြာအောင်မီးထဲသို့ပုံသွင်းနိုင်ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို Doug တွေ့ရှိသော်လည်းတစ်နေ့လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ပင်ပန်းနေပြီဖြစ်သည်။ အရိုးပင်ပန်းနေသည်။ ၎င်းဖြစ်ပျက်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်နောက်တစ်နေ့တွင်အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်နှစ်ခု။
ငါလုပ်ပြီးတာနဲ့ငါ "ပုံမှန်" အချိန်ဇယားကိုပြန်ရနိုင်🙂
မတ်လ 25, 2007 မှာ 11: 18 AM
ဝမ်းသာပါတယ်၊ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ စတိဗ်!
မတ်လ 25, 2007 မှာ 1: 06 pm တွင်
ငါလည်းအဲ့တာကိုတွေ့ကြုံခံစားလာတာ .. ငါအများကြီးလုပ်ဖို့ငါလုပ်နေတယ်ထင်တယ် .. ငါငါတို့အားလုံးနှေးကွေးဖို့လိုတယ်ထင်တယ်
မေလ 11, 2011 မှာ 7: 07 AM
အီးမေးလ်သည်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးစားသည်အီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုသည်။ လွယ်ကူ။ အကုန်အကျနည်းသည်။ ထိရောက်သောမေးလ်စီမံခန့်ခွဲမှု ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်သင်၏စီးပွားရေးအလားအလာကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်။